14 Pro Matipi Kana Uchisangana naiye / Vabereki Vake Kekutanga Nguva - Ukama
14 Pro Matipi Kana Uchisangana naiye / Vabereki Vake Kekutanga Nguva
Kusangana nevabereki chinhu chikuru - pane mafirimu akagadzirwa nezve ino nguva, shure kwezvose!
Kunyangwe iwe uri pachena padanho rakakura muhukama hwako kuti usangane nevabereki vemumwe wako, zvinogona kuramba zvichinzwa kutyisa.
Kunze kwekurega katsi ichipukunyuka, hapana zvakawanda zvinhu zvaunogona kunyatsoita zvisirizvo.
Izvo zvataurwa, taisa pamwechete rondedzero yemazano ekusangana nevabereki, kungokubatsira munzira.
1. Iva anoonekera.
Simuka utarise wakangwara! Izvo hazvifanire kuda kutaurwa, asi kubva pane zvakasangana newe, vamwe vanhu ita ndoda kutaurwa.
Usaende kuTT uye wobva wapfeka tux kana gown rebhora, asi ita nhamburiko yekutaridzika.
Iwe unongowana mukana mumwe chete wekutanga kuratidza kuvabereki vavo, saka ita nepaunogona napo kuti utarike wakangwara, akapfeka zvakakodzera, uye semunhu mukuru.
Sunga hembe ine skimpy uye yepamusoro-cheka kumusoro, funga kupfeka shangu kwete mateki, uye bvisa bvudzi rako mumaziso ako.
Ipo iwe usingafanire kunzwa kudiwa kwekupfeka zvakatosiyana neyakajairwa kana kuviga yako yakasarudzika maitiro, kuita zvishoma zvishoma kuita nesimba kuchabhadhara zvikwereti.
2. Tora chipo.
Tarisa nemumwe wako kana izvi zvakakodzera - vamwe vanhu havadi zvipo sezvo zvichivaita kuti vanzwe kusagadzikana.
Kune vamwe, kune nhungamiro dzetsika dzakatenderedza izvo zvipo zvinogumbura, saka zvakakodzera kuti utarise kana usina chokwadi.
Bhodhoro rewaini, mamwe maruva, machokoreti, kana dhizeti ipfungwa dzakanaka kana uchienda kunodya.
3. Yambiro pamusoro pezvose zvinodiwa pakudya.
Ita shuwa kuti mumwe wako akavaudza kana iwe uine zvekudya zvaunoda pamberi vanokubikira chikafu!
Vanogona kungofungidzira kuti unodya nyama, kana kusaziva kuti une kusashivirira kwemukaka, uye zvirinani kuti uzvigadzirise usati watanga kunobatsira kukuru lasagne uye kudya kwemanheru kwakanyanya…
4. Verenga kamuri.
Rangarira kuchengeta hurukuro yacho yakakodzera kune vateereri. Iyo nyaya iyo vamwe vako vakawana inonakidza inogona kunge isingakodzere kugovana pamberi pevabereki veumwe wako - zvirinani kwete pakutanga!
Kunyangwe isu tichinyatso kubvumirana kuti iwe unofanirwa kuve wega uye ivo vachakuda zvakanyanya sezvinoita mumwe wako, iwe unofanirwa kuramba uchibata izvo zvinhu zvehunhu hwako zvaunosarudza kugovana ipapo.
Sezvakangoita iwe ungangozorega kutuka zvakanyanya seyakajairwa kana iwe uine vanasekuru vako, gadzirisa matauriro ako nezviito kune vanhu vauri pano zvakare.
5. Iva nehunhu, kwete smarmy.
Hapana munhu anoda kuyamwa-kukwira, saka tsvaga mukana wakanaka pakati pekuremekedza uye kuva wepachokwadi.
Usaite kuratidzwa kukuru kwekubatsira kana kukurudzira chimwe chinhu, ingo chiwisira pasi zvisina ruzha kana chinyararire ipa ruoko.
Iwe haufanire kukwevera kutarisa kune ichi chinhu chechinhu - chinozoonekwa nekukosheswa iwe usati waita rwiyo nekutamba nezvazvo!
6. Tevedza mitemo yepamba.
Kana paine murwi weshangu pamusuwo, bvisa yako. Kana imbwa isina kupihwa chikafu kubva patafura, usamupe zvakasara kubva mundiro yako. Kana vakati nyasha, gara wakanyarara kana kujoina kana iwe uchinamata.
Kutevedzera mitemo yevaridzi vedzimba ndiyo nzira yakanakisa yekuita yakanaka yekutanga kuona kana uchisangana nemukomana wako kana vabereki vemusikana.
Zvinoreva zvakare kuti havazonzwa kusanzwisisika vachikukumbira kuti uite chimwe chinhu - unenge watove pachiri!
7. Ratidza kufarira.
Kana ivo vari kutaura nezve chimwe chinhu, teerera. Ratidza kufarira uye ita navo zvechokwadi.
Unogona kunge usiri iwo musoro waunofarira iwe pachako, asi iwe unofanirwa kuita nhamburiko yekujoinha hurukuro navo.
Iwe unogona zvakare kutanga nhaurirano, hongu, uchichenjerera kudzivirira chero chingangoita chinokonzeresa kana kupokana. Zvakanaka uye zvakajairika kusawirirana nemumwe munhu pamusoro pezvematongerwo enyika, semuenzaniso, asi izvi hazvireve kuti iwe unofanirwa kuzviunza kekutanga nguva yaunosangana nevabereki vemumwe wako.
8. Usave zvakare coupley.
Nekudaro, amai nababa vemumwe wako vanoziva kuti muri pamwe chete, asi izvo hazviite kuti zvive zvakanaka kuti iwe uve wakanyanyisa coupley pamberi pavo.
Iwe unogona kugadzira kunze kwekupedzisira, saka ingozvichengeta zvakanaka uye PG paunenge uine vabereki vavo!
Inogona kunge iri nguva yekutanga kuona mwana wavo muhukama, saka zvinogona kunge zvichishamisa kuti vasangane newe, ndoda kukutarisa uchirova vhudzi ravo.
Iva neruremekedzo, iva nehunhu, uye uratidze kuti iwe une hunhu hwako nekuve wakasununguka kubata hurukuro usingavimbe nemumwe wako.
9. Usaite monopolize zvinhu.
Hongu, ichi chiitiko chemagariro chakaitirwa kuti vabereki vemumwe wako vakuzive, asi hazvireve kuti zviri zvako iwe!
Edza kusabata wega hurukuro, uye ita shuwa kuti munhu wese anobatanidzwa.
Zviri nyore kungogara ipapo uye rega vabereki vakubvunze nemibvunzo, asi iwe uchaita irinani zvirinani kana iwe ukashinga kutanga hurukuro, ukaita nhamburiko yekuchengetedza munhu wese kubatikana, uye uchikwanisa kuzvibata zvako.
10. Iva netsitsi.
Iwe haugone kutarisira musangano wekutanga wakakwana, saka usazvimisikidza kukanganiswa nekuita izvi!
Ita nepaunogona napo kutarisira kuti inogona kuve isinganetsi, uye bvuma kuti iwe ungangowana zvishoma kusagadzikana pane dzimwe nguva.
Ichave yakanaka kwazvo, asi edza kuita kuti kutarisira kwako kuve kwechokwadi paunenge uchienda muchiitiko ichi chemagariro.
11. Iva wakagadzirira kuona rumwe rutivi kune mumwe wako.
Iwe unogona kufunga kuti unoziva mudiwa wako mukati kunze, asi iwe unozodzidza murwi wese zvakanyanya kana uchinge wavaona vakakomberedza mhuri yavo!
Ivo vanogona kuve vanotapira zvakanyanya, vanyari vhezheni yakatenderedza vabereki vavo uye vodzokera kumashure pakuve mwana. Saizvozvo, vanogona kudonha vachidzokera pakuve wechidiki ane stroppy uye vane mini tantrum.
Chero nzira, gadzirira kuona rimwe divi kumukomana kana musikana wako paunosangana nevabereki vavo.
Mumwe wako anogona kushushikana zvakanyanya nezve iwe kusangana nevabereki vavo nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka - pamwe havana kumbobvira vafarira vavakaroorana navo, kana kuti vangangove vasina hukama hwakakura nevabereki vavo pachavo.
Vanogona kunyara nekwavanobva kana nehupenyu hwavo hwekare, saka iva nemoyo murefu uye uratidze rutsigiro.
chii chinoita gamba gamba
Vayeuchidze kuti unovada uye unoda kuvaita kuti vafare, kunyangwe izvi zvichireva kuenda kunodya kana kubhaiza miniti yekupedzisira nekuti ivo vari kunzwa kunetseka zvakanyanya.
Tungamira uye famba nenzira yavo.
13. Zvibvumire kuti unakirwe nazvo.
Isu tinowanzo tarisa pane 'zviitiko' nemhedzisiro yavo (semuenzaniso. 'Vachatikumbira kuti tidye zvakare?' .
Iwe unogona netsaona kupotsa pane nyaya dzinonakidza dzeumwe wako semwana nekuti iwe wakabatikana zvakanyanya kutarisisa pahunhu hwako uye tafura yehunhu!
Iva munhu anonzwisisa uye ane pfungwa, asi zvakare zvirege uchizorora muzvinhu uye unakirwe kuve wakakosha kune mumwe munhu zvekuti ivo vanoda kuti munhu wese asangane newe uye akudewo iwe!
14. Kupera pane chinyorwa chakanaka.
Ichi chiri pachena, asi ita shuwa kuti uti maita basa kana vakubikira kudya kwemanheru, kana kutaura kuti kwaifadza sei kusangana navo.
Zvakakosha kuva vakuru uye kubvuma kuedza kwavakaenda. Ivo vanozokoshesa chaizvo iwe kupedzisa zvinhu pane yakanaka chinyorwa, uye chichava chimwe chinhu chiri chitsva mundangariro dzavo pavanotanga kutaura nezvako iwe uchangobuda / ivo vobva!
Une mibvunzo nezve kusangana nevabereki vemumwe wako? Taura zvepamhepo kune hukama hukama kubva kuRelationship Gamba uyo anogona kukubatsira kuti uone zvinhu. Simply.
Ungaita Sei Kuti Uve Unodakadza: 13 Hapana Nonsense Matipi!
Nzira Yokuita Nayo Nhaurwa Diki: 8 Hapana Bullsh * t Matipi + 8 Starter Misoro
Kufamba Kwako Pamwe Chete Rondedzero - 8 Zvinhu Zvokufunga nezvazvo Kare
Haufarire Mwanakomana Wako / Mwanasikana Mukomana / Mwanasikana? Verenga Izvi.
kana wapedza nehukama
anodanana neni asi anotya
unovimba sei nemunhu anonyepa
sei kuchengeta convo ichienda
kana mukomana akatarisa mumaziso ako asina kunyemwerera
paunosuwa mumwe munhu zvakanyanya